Isbarbardhigga Saddexda Nooc ee Soosaaraha Soo Saaraha, Alaabta, Warshada - Dhimayaasha, Dixiyayaasha, Sanduuqyada Gear-ka Gooryaanka, Sanduuqyada Gear-ka meeraha, Jareyaasha xawaaraha, kala duwanaanshaha, Gear Helicical, Marshadaha Gawaarida, Gawaarida Beeraha, Gawaarida Cagafyada, Gawaarida Xamuulka, Sanduuqa Gear-ka Gooryaanka
Jeexdu waa aalad loo isticmaalo in lagu sameeyo dhaqdhaqaaq wareeg ah. Waxaa jira saddex nooc oo waaweyn: go'an, dhaqaaqi kara, iyo jiido isku dhafan. Aynu eegno nooc kasta iyo sida ay u kala duwan yihiin. Ku darida jiido badan isla mashiinka sidoo kale waa suurtagal. Maqaalkan, waxaan is barbardhigi doonaa oo isbarbardhigi doonaa saddexda nooc. Waxaad sidoo kale eegi kartaa shaxda isbarbardhigga ee hoose si aad wax badan uga barato. Hoos waxaa ku taxan xaqiiqooyin muhiim ah oo ku saabsan nooc kasta.
jiid laba-taayir ah
Jeexitaanka labada taayir leh waa nooc caan ah oo jiidi ah oo inta badan lagu isticmaalo mishiinada. Waxa lagu gartaa laba taariko adag oo dhexdhexaad ah. Dimples-ka saxanku waxa uu caawiyaa toosinta tooska ah marka ay ku rogrogmadaan agagaarka jiidka. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka joogtada ah ee nidaamka ayaa dami kara xargaha oo daciifin kara. Waxaa intaa dheer, xadhig jaban wuxuu dhaawici karaa hawlwadeenka, deegaanka, iyo culeyska.
Pulleys waa mashiinno fudud oo u oggolaanaya in ay yareeyaan dadaalka aadanaha ee qaadista walxaha culus. Iyagu way go'an yihiin xitaa marka culaysku dhinac ka jiro, xoogna dhinaca kale ayaa lagu dabaqaa. Saamigan shaqo ee faa'iidada leh waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu dhufto cabbirka jilitaanka weyn tirada ilkaha kan yar. Marka aad ogaato cabbirka iyo qaabka jilbaha labada taayir leh, waxaad xisaabin kartaa xawaarihiisa.
Jeex la dhaqaajin karo
Jilibka dhaqaaqi kara waa qalab makaanik ah oo leh xadhig iyo xudun ku rakiban dabada. Waxay leedahay adeegsiyo badan waxaana loo adeegsadaa warshado badan. Jeexjeexyada qaarkood waxay beddelaan jihada xoogga, halka qaar kalena ay beddelaan cabbirkooda. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah isticmaalkooda caadiga ah:
Marka loo isticmaalo in la qaado walxaha, jiidi dhaqaaqi karo ayaa labanlaabmaya xoogga loo baahan yahay si loo dhaqaajiyo rarka. Tani waa sababta oo ah dhexroorka hal jiiduhu waa kala badh ka weyn yahay kan kale. Natiijo ahaan, sanduuqa 100-newton wuxuu u baahan yahay kaliya konton cusub oo xoog ah si uu u dhaqaaqo. Awoodda qaadista culeysku waxay kuxirantahay tirada xargaha. Jeexjeex kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin u gaar ah. Waa kuwan afarta faa'iidooyin ee ugu sarreeya isticmaalka mid.
Jilid go'an ayaa kuu ogolaanaysa inaad beddesho jihada xoogga markaad qaadayso walxaha aadka u culus ee kor loogu qaadayo jaranjarada. Way ku habboon tahay qaadista walxaha marka jihada xoogga aysan la mid ahayn markaad kor u qaaddo jaranjarada. Qalabkani waxa kale oo uu xafidaa durbaanka ama rarka meel keliya. Sidaa darteed, jiidi go'an ayaa kuu ogolaanaya inaad kor u qaaddo walxo ka culus adiga oo dadaal yar ku leh dhinacaaga.
Jilibka go'an wuxuu leeyahay taayir ku dheggan usheeda dhexe. Xadhig ayaa dhex mara shaagagga jilibka go'an, isagoo beddelaya jihada shayga la qaadayo. Si ka duwan jiidi dhaqaaqi karo, ee ku dhaqaaqa shayga kor loo qaadayo, jiidh go'an ayaa u baahan dadaal yar si uu u dhaqaajiyo shay culus. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalkeedu wuxuu ku kooban yahay hawlo yaryar. Waxaad u isticmaali kartaa inaad dhaqaajiso tiirka calanka ama calan.
Ku darida jiido badan
Ku darida jiido badan nidaamka xargahaaga ayaa kuu ogolaanaya inaad kor u qaaddo walxaha culus oo leh qadar hoose oo xoog ah. Mabda'a ku darida jilbaha waa mid fudud - waxaad u baahan tahay xadhig badan si aad u dhaqaajiso hal cag oo miisaan ah, laakiin jiido badan, waxaad taageeri kartaa 100 jeer miisaanka. Si loo xisaabiyo xoogga loo baahan yahay si kor loogu qaado xaddi miisaan ah, u qaybi xoogga iska caabinta xoogga dadaalka. Ka dib, u qaybi qaddarkaas miisaanka shayga si loo go'aamiyo IMA.
Mashiinnada fudud sida jilbaha ayaa bixiya faa'iido farsamo. Waxay u baahan yihiin xoog yar, laakiin waxay qaadan karaan qol ama waqti badan si ay u qaadaan shayga. Markaad isticmaasho mishiinka fudud, xoog yar oo lagu dabaqo masaafo dheer waxay soo saartaa saameyn la mid ah xoogga weyn. Farqigaas xoogga ah waxaa loo yaqaan faa'iidada farsamada. Waxaa lagu qiyaasaa sida saamiga xoogga wax soo saarka iyo xoogga wax soo saarka. Mashiinnada fudud, saamigani had iyo jeer wuu ka weyn yahay hal.
Jiidista miisaanka ayaa la fududeeyaa iyada oo la kordhinayo faa'iidada farsamada ee habka jiidista. Marka ay jiraan laba siddo oo jiid ah, xoogga loo baahan yahay si loo jiido shayga ayaa yaraanaya. Xadhiggu wuxuu soo jiidaa qayb kasta, isagoo yareynaya khilaafka u dhexeeya xadhigga iyo miisaanka. Faa'iidada makaaniga ah ee jilbisku sidoo kale way ka weyn tahay xoogga loo baahan yahay in lagu qaado miisaan leh hal wareeg oo keliya.
Faa'iidada makaanikada waa saamiga xoogga lagu isticmaalo xoogga la isticmaalo. Marka la isticmaalayo jiidi, saamiga ugu habboon ee radiyada jiid jiid iyo giraangiraha waa weyn yahay. Qaybaha xadhkaha badan ee la isticmaalo, ayaa ka sii weyn faa'iidada farsamada. Tusaale ahaan, jiidi oo leh afar qaybood oo xadhig ah waxay leedahay faa'iido farsamo oo afar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in dadaalka loo baahan yahay in lagu qaado miisaanka uu la mid yahay miisaanka jidhka ee habka loop-ka ah.